भदौ ३० भित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्ने दबाबमा सरकार, आज पास होला ? - Arthasansar
शुक्रबार, ०६ जेठ २०७९ | Friday, May 20, 2022 प्रीति - युनिकोड
भदौ ३० भित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्ने दबाबमा सरकार, आज पास होला ?
मंगलबार, २९ भदौ २०७८, ०७ : २३ मा प्रकाशित
प्रतिनिधि सभाको जारी नवौँ अधिवेशनको बैठक आज मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्ने सरकारी पक्षको तयारी छ भने त्यसलाई जसरी पनि रोक्ने रणनीतिमा नेकपा (एमाले) छ ।
सरकारले गत शुक्रबार मात्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याएको थियो । एमालेका सांसदको अवरोधका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट ल्याएका थिए । त्यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वर्तमान सरकारले काँटछाँट गरिदिएको छ ।
तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट ३ साउनमा संसदमा पेश भएको थियो । २५ भदौमा प्रतिस्थापन बजेट ल्याइयो । संसदमा अध्यादेश पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनुपर्छ । अर्थात भदौ ३० भित्र पास गरिसक्नुपर्ने दबाब छ । र, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
मंगलबारको सम्भावित कार्यसूचीमाअर्थमन्त्री शर्माले 'विनियोजन विधेयक, २०७८' माथि विचार गरियोस् भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । तर एमाले हरेक बैठकमा बेल घेर्दै आएको छ । आइतबारको संसद बैठक पनि एमालेको अवरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा सत्तासीन दलका नेताहरू सहभागी भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरू अनुपस्थित रहे । जसकारण बैठकले कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन ।
एमालेले पछिल्लो पटक दुई वटा सर्त तेस्याएको छ । एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको सूचना टास गर्नुपर्ने वा सभामुख सापकोटाले मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने । तर, कारबाही विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसबारे संसदमा टिप्पणी गर्न नमिल्ने धारणा सभामुख सापकोटाको छ ।
अन्नपुर्ण केबुलकार चढ्दा माछापुच्छ्रे बैंकका ग्राहकले छुट पाउने
नेपाल टेलिकमकाे फोरजी ग्राहक संख्या १ करोड नाघ्याे
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका ग्राहकलाई सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपमा विशेष छुट
हिमालयन हाइड्रोपावरको आईपीओमा कति पर्याे आवेदन ? यस्ताे छ पछिल्लाे अपडेट
नेपाल फाइनान्सकाे हकप्रदमा पहिलाे दिन कति पर्याे आवेदन ?
नबिल बैंक र नेपाल बङ्गलादेश बैंककाे विशेष साधारण सभा शनिबार हुँदै
दोर्दी खोलालाई आईपीओ बिकाउन हम्मेहम्मे, अन्तिम दिनसम्म ६९% मात्र बिक्यो
नेप्सेमा ३० लाख कित्ता हकप्रद सूचिकृत
सिवाईसी नेपालको आईपीओ सूचिकरण कहिले ? यस्ताे छ सेयर रजिष्ट्रारकाे जवाफ